प्रकृति र वनको मूल्य मानव जीवन यो विशाल र वैविध्यपूर्ण छ, छैन overestimated गर्न सकिन्छ। मान्छे अतिप्राचीन समय देखि आफ्नो स्रोतहरू प्रयोग गर्नुहोस्। र हालै मात्र वनको संरक्षण, यसको बहाली र सावधान प्रयोग को प्रश्न सामने आए।
माटो र हाइड्रो भूमिका
कहिलेकाहीं एक व्यक्ति कुन प्रकृति र मानव जीवनमा वनको मुख्य भूमिका छ बारे बिर्सनुहुन्न। मात्र कहाँ स्थित छ, तर यसको छिमेकी क्षेत्रमा पनि, मान्छे प्रकृति को ब्यालेन्स, र यो, बारी मा, गर्न सक्छ को उल्लंघन साक्षी छन् क्षेत्रमा यो एक महत्वपूर्ण प्रभाव छ भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता पर्यावरण प्रकोप।
वन gidrorezhim जसको पूल को arrays मा स्थित हो पानी सबै ठूलो र सानो शरीर, सुधार गर्छ। विनाश देखि माटो सुरक्षा बाहिर हालै झन् सबै मानिसहरू प्रयोग गरिएको छ जो एक विशेष अवतरण, गर्न प्रजाति प्राकृतिक अवस्था बढ्दै, र धन्यवाद को खर्च मा दुवै लगे छ। वन माटो को खनिज संरचना राख्न मदत। स्टक पानी माटो तहहरू मार्फत पारित हानिकारक ठोस छूट दिइएका छन्।
संरक्षण वा यसको वन पुनस्थापित, एक मानिस वातावरण, सुधार गर्ने जलवायु गठन सकारात्मक प्रभाव छ। हरियो पोशाक ग्रह - एक अक्सिजन को उत्पादन को लागि "प्रयोगशाला", जो बिना धरती मा जीवन को अस्तित्व।
वन - पशु वासस्थानमा एक ठाउँ
प्रकृति र मानव जीवनमा वनको भूमिका विचार, हामी धेरै Fauna घर छ भनेर भन्न सक्दैन। उहाँले - ग्रह मा मुख्य भान्साको सामान राख्ने ठाउ तरकारी कुरा। समुदायको मा शाकाहारी मांसाहारी र सर्वाहारी, जो खाद्य श्रृंखला फारम को प्रजाति को एक महान विविधता छ किन कि छ। यी सम्बन्ध सन्तुलन धन्यवाद प्रकृतिका कायम छ।
धेरै वन dwellers बिरुवाहरु को pollinators छन्, बीउ फैलाउने योगदान वनस्पति पैदा र बाँच्न मद्दत। पशु र चरा को मा व्यावसायिक महत्व छन् मान्छे को आर्थिक गतिविधिहरु। मानिस बहुमूल्य फर र मासु हुन् उत्पादन गर्छ। आज, जनावर शिकार केही प्रजाति पुनर्स्थापना र संरक्षण गर्न योगदान गर्ने व्यवस्था द्वारा नियमन छ।
कारण मानिसहरूले गर्न योजना शिकार जनावर को प्रकृति कायम गर्न व्यवस्थापन र केही प्रकारको वन बिरुवाहरु। त्यहाँ वनस्पति जनावर वा किरा चराई द्वारा नष्ट भएको थियो जब अवस्थामा छन्।
जंगल र मानव आफ्नो महत्त्व
प्रकृति र मानव जीवनमा वनको भूमिका विचार, हामी काठ लागि मानव आवश्यकता बेवास्ता गर्न सक्दैनन्। यसलाई सधैं ठूलो भएको छ, यसलाई आज भन्दा कम थियो। यसबाहेक, आधुनिक आर्थिक गतिविधिहरु, यो विश्वव्यापी बन्नेछ।
कच्चा काठ प्रयोग घटाउने पूर्वानुमान, रूस वा विश्व बजार मा या त जायज छैन। प्रवृत्ति तथ्यलाई नेतृत्व काठ एक अभाव कच्चा माल हुनेछ कि सकेनन्, र यो धेरै उपभोक्ता मानव लागि आवश्यक सामान को उत्पादन मा एक प्रभाव हुनेछ।
प्रकृति र मानव जीवनमा वनको भूमिका तीव्र शहरी विकास एक अवधिमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मानव शरीरमा हरियो ठाउँ को चिकित्सकीय प्रभाव चिकित्सकहरु द्वारा साबित भएको छ। यो यस कारण लागि हो, घर, sanatoriums, पुनःस्थापना केन्द्र अक्सर वन क्षेत्रमा सुविधा आराम।
को बगैंचाहरु मार्फत हिड्ने मान्छे, पार्क, ठूलो उठाउन सौंदर्य खुशी, राम्रो समग्र स्वास्थ्य तिर जान्छ।
वन जीवनमा मानव हस्तक्षेप को नतिजा
कुनै पनि मानव गतिविधि Housekeeping सम्बन्धित, आफ्नो वातावरण मा एक प्रभाव छ। कहिलेकाहीं, समय मान्छे मात्र खण्डमा आफ्नो हस्तक्षेप को पारिस्थितिकी गर्न क्षति को स्तर आकलन गर्न सक्छन्।
उदाहरणका लागि, conifers ठूलो क्षेत्रमा भन्दा arrays ढाल्दै थिए प्रकृतिका वनको मूल्य र यो व्यक्ति स्पष्ट भयो। सन्टी, Aspen: एक पटक इलाका रूखहरू कम मूल्यवान प्रजाति द्वारा आबादी भए सबै। जंगल चिस्यान मात्र कायम रहन्छ छ रूपमा एकदम, को marshes को क्षेत्र वृद्धि, र उहाँले यसलाई प्रयोग। वनस्पति को प्रजाति संरचना परिवर्तन निरंतर केही प्रजाति को क्षेत्रहरूमा को लापता र अन्य Fauna को उद्भव गर्न जान्छ।
भने के भएको र चार्ट गर्न संक्षेप गर्न प्रयास: "प्रकृति र मानव जीवनमा वनको भूमिका", केही महत्त्वपूर्ण कारक उल्लेख गर्न निश्चित हुन।
कि अप वातावरण बनाउन घटक, राम्ररी सम्वन्धि छन्।
वन पृथ्वी जलवायु असर गर्छ।
काठ कच्चा माल व्यापक मानव आर्थिक गतिविधिमा प्रयोग भएको छ।
Plantings मानव शरीर मा उपचारात्मक प्रभाव छ।
चार्ट गर्न "मान्छे को प्रकृति र जीवन मा वन को भूमिका" arrays को महादेशमा वा व्यक्तिगत देशहरूको क्षेत्रमा विनियोजन कसरी ज्ञान मदत गर्नेछ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आज वनको भूगोल, आफ्नो प्रसार गतिशीलता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी अध्ययन गरिएको छ। पृथ्वी वन को एक पाँचौं रूस को क्षेत्र मा स्थित छ कि यो साबित भएको छ।
कति प्रत्यक्ष grasshoppers? को कीराहरूको को संक्षिप्त विवरण
Kris Payn (क्रिस पाइन) - जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, आफ्नो चलचित्रहरू
मोती संग प्रौद्योगिकी कढाई - आफ्नै हात को masterpieces
विभिन्न RGB रंग?
"तेंदुआ" भगवानको आमाको प्रतिमा हो। प्रार्थना, अर्थ
साइबेरियन राज्य विश्वविद्यालय Geosystems र प्रौद्योगिकी (SGUGiT): वर्णन, सुविधाहरू, संकाय र समीक्षा
के तपाईंलाई पनीर एक्स्टेन्शन चाहिन्छ जस्तो लाग्छ? समीक्षाहरू अध्ययन गर्न आवश्यक छैन